बझाङी राजा देवीजंग सिंहसम्म: पिताजीको पाइला पच्छ्याउँदै | सिमान्तMarginal बझाङी राजा देवीजंग सिंहसम्म: पिताजीको पाइला पच्छ्याउँदै – सिमान्तMarginal
हाम्रा पिताजी कवि बालचन्द्र वाग्लेले हामीलाई सुनाउनु भए अनुसार उहाँ १४–१५ वर्षको हुँदा जागिरको सिलसिलामा बझाङ्, डोटी, जुम्ला, पुग्नुभएको थियो । बझाङ्मा रहँदा उहाँको बझाङी राजा देवीजंग सिंह (जयपृथ्वी बहादुर सिंहका छोरा) सँग राम्रो परिचय भएको थियो । पिताजी बझाङमा रहँदा नै राजा देवीजंग सिंहको निधन भएछ । त्यो दुखद् घटना र राजा सिंहको योगदानको संस्मरण गर्दै पिताजीले शोक श्लोक सङ्ग्रह (५१३वटा श्लोक ) तयार गरेर देवीजंग सिंहको १३ औंका दिन श्लोक सुनाउँदा उहाँका साहिला छोरा र रानी वेहोस् हुनुभएछ । पछि रानीले त्यस वापत पिताजीलाई आफ्नो खान्कीबाट मासिक रु.१३ रुपियाँ थपिदिनु भएछ । सुब्बाको भन्दा पिताजीको तलव धेरै भयो अरे ।
पिताजीले त्यो शोक सङ्ग्रह देवी जङ्गकी रानी र बझाङमा उनै राजपरिवारले शिक्षा विस्तारका लागि भारतबाट ल्याउनु भएका भारत अष्कोटका शिक्षक रामदत्त अवस्थीलाई एकएक प्रति जिम्मा दिनुभई काठमाडौँ फर्कनु भएछ ।
पछि मैले बझाङ जिल्ला विकास समितिका पूर्व सभापति तथा मेरा आत्मीय मित्र चेतराज बजालसँग यस बारेमा कुरा गर्दा (२०७३) उहाँले पनि रामदत्त अवस्थीलाई चिन्नु भएको रहेछ । तर ६–७ वर्षअघि नै निधन भएको बताउनु भयो । देवीजंगका नातीहरू काठमाडौमा हुनुहुन्छ रे । रामदत्तका छोरा (डा. दिनेशचन्द्र अवस्थी) भारतमा चिकित्सक हुनुुहन्छ भन्ने मैले यसपटक बझाङ जाँदा पत्ता लगाएँ ।
देवीजंग सिंहको १३ औंका दिन श्लोक सुनाउँदा उहाँका साहिला छोरा र रानी वेहोस् हुनुभएछ । पछि रानीले त्यस वापत पिताजीलाई आफ्नो खान्कीबाट मासिक रु.१३ रुपियाँ थपिदिनु भएछ । सुब्बाको भन्दा पिताजीको तलव धेरै भयो अरे ।
यहाँ मैले लिएका फोटामध्ये देवीजंगको यो ‘दरवार’ उही पुरानो जहाँ मेरा पिताजीको आवतजावत भएको थियो । त्यो दरवारको स्वामित्वबारे स्थानीय कसैले पनि मलाई बताउन सक्नु भएन ।
अर्को घर जसलाई अहिले हात्तीसार भनिन्छ, त्यो घरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय छ । यो राजा जयपृथ्वीजंग सिंहको दरवार हो ।
पिताजी स्वर्गमा रहनु भएकाले थप जानकारी हुने अवस्था छैन तर अहिले बझाङ, डोटी र केही वर्षअघि जुम्लामा पिताको पाइला पच्छ्याउँै जाँदा स्वर्गै पुगे जस्तो भयो ।
खप्तडको साहित्यिक कार्यक्रममार्फत पिताजीको कर्मथलो बझाङ पुग्ने अवसर दिनु भएकामा कवि पदमराज जोशी प्रभात (कैलाली साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष) प्रति सतत आभार व्यक्त गर्छु । यसबारेमा थप जानकारी दिन सक्नु हुने व्यक्तिसंग सम्पर्क गर्ने प्रयासमा छु ।
– त्रिभुवनचन्द्र वाग्लेको फेसबुक पेजबाट साभार
Bajhangi Raja Devijung ko Darwar2
Bajhangi Raja Devijung ko Darwar
Previous Postरेमिटेन्स खानेहरु बोल्दैनन् ! हेर्नुहोस्, अपराधको डरलाग्दो तथ्यांकNext Postओलीको करिस्मा: भय साँचो हो भने सरकारको आयु पनि छोटिदै जानेछ !